के हजुर ओकिनावाको ईशिगाकी टापु जादै हुनु हुन्छ ? यो सुन्दर होटेलमा बस्ने कि ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Hotel > के हजुर ओकिनावाको ईशिगाकी टापु जादै हुनु हुन्छ ? यो सुन्दर होटेलमा बस्ने कि ?
इशिगाकी ओकिनावाको एक टापु हो। ओकिनावा जापानको दक्षिन फेदीमा पर्दछ। धेरैले ओकिनावालाई ट्रपिकल प्याराडाईज भन्दछन। यहाँ रमाइलोको लागि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ. त्यसैले जापानको मुख्य सहरका धेरै मानिसहरु अलि लामो बिदा हुने बित्तिकै रिल्याक्स गर्न र स्ट्रेस भगाउन ओकिनावा को यो टापु पुग्दछन।
इशिगाकी टापु सुन्दर समुद्री तट, मिजासिला मानिस, र मिठो परिकारको लागि प्रख्यात छ. हजुरको ट्राभलको एउटा मुख्य कुरा भनेको “कहाँ बस्ने” पनि हो। इशिगावामा थुप्रै होटेल र रिसोर्टहरु छन्। तर आज हजुरहरुलाई जानकारी गराउन गईरहेको होटेल, म अघिल्लो चोटी ओकिनावा जादा बसेर आएको होटेल हो। म बसेको होटेलको नाम “बीच होटल सन्शाईन” हो। यदि हजुरहरु कोहि इशिगाकी टापु जादै हुनु हुन्छ भने पक्कै पनि यो होटल एक चोटी बस्नु हुन रिकमेण्ड गर्दछु
लोकेसन र रूम
बीच होटल सन्साईन इशिगाकी टापुको मुख्य सहरबाट कारमा १० मिनेट र बन्दरगाह बाट १५ मिनेट जति लाग्दछ। यो होटेल बाट हजुरले छेउका ताकेतोमी र हातेरुमा जस्ता टापुमा जना सक्नु हुनेछ। यदि हजुर प्याकेज टुर बुक गर्नु भएको छ भने होटेलबाट दिनभरमा छुट्ने थुप्रै फ्रीको सटल बस पनि पाईन्छ. जसले गर्दा हजुरलाई होटेल बाट निस्कन सजिलो पनि हुन्छ।
ओसन भ्यु को रुमहरुमा एटेच्ड बरण्डा छन्। तर यी रूम अलि महँगो छन्। बीच होटेल बाट नजिकै भएकोले सस्तो अप्सनको लागि समुद्रको भ्यु नभएको रुम्पानी पाईन्छ। होटेलको प्रिजेण्टेसन निकै सरल र सफा छ। रिसेप्सन निकै फराकिलो र स्वागतिलो छ। स्टाफहरु पनि निकै मिजासिला छन्. उनीहरु आफ्ना पाहुनालाई ट्याक्सी बुक गर्ने देखि डिनर रिजर्भेसन् गर्न समेत मद्दत गर्दछन।
स्विमिङ्ग पुल र अन्य फ्यासिलिटी
यो होटलको सबै भन्दा आकर्षक पक्ष यसको ठूलो स्विमिङ्ग पुल हो। यो पुल त्यति गहिरो नभएकोले रिल्याक्स गर्न निकै रमाइलो छ. यहाँ केहि सन् बाथ गर्न राखिएका कुर्सिहरु पनि छन्। यो होटल लबी बाट निकै नजिक छ।
यो पूल अप्रिल बाट सेप्टेम्बर सम्म खुल्ला हुन्छ। तर जाडो महिनामा बन्द गर्ने गरिएको रहेछ। तर हामीले स्टाफलाई अनुरोध गरेपछि खोल्दिएका थिए। भनिन्छ नि सोध्न र अनुरोध गर्न पैसा लाग्दैन। यो पुलमा पानि तताउने सिस्टम नभएता पनि ईशिगाकि जाडो महिनामा पनि न्यानो हुने भएकोले फरक पर्दैन।
Yबरण्डामा डिनर गर्न वा ड्रिङ्क गर्न मिल्ने भएकोले निकै रोम्याण्टिक छ। बरण्डा कजी भएकोले गर्दा सनसेट हेर्न निकै आरामदायी छ। तर होटेलको डिनर निकै महँगो भएकोले यदि हजुर बजेटमा हुनु हुन्छ भने एउटा ड्रिङ्क लिएर सनसेट हेर्ने अनि खाना चाहि बाहिर खादा हुन्छ। मेरो लागि बियर पिउदै सुर्य अस्ताएको हेर्नको बेग्लै मज्जा छ।
होटेलले हरेक बिहान अप्सनल ब्रेकफास्ट सर्भ गर्दछ। यो ब्रेकफास्ट फ्री भने हुदैन। यदि हजुर पैसा खर्च गर्न चाहनु हुन्न भने फ्रीको डेटोक्स पानी भने पीउन सक्नु हुन्छ. यो पानीमा थुप्रै किसिमको फ़्रुइत मिसाईएको हुनाले निकै रिफ्रेसिंग हुन्छ। होटेलको लबीको एउटा कुनामा कोसेली र उपहार किन्ने ठाउ पनि छ। यहाँ हजुरले ओकिनवाको अथेण्टिक कोशेली किन्न सक्नु हुनेछ।
म यो सुन्दर ४ तारे होटलमा बस्न ओकिनावा जानुहुने सबैलाई रिकमेण्ड गर्दछु। यो होटेलको बसाईले हजुरको टेन्सन र स्ट्रेस सबै हराएर जाने कुरामा पूर्ण विस्वाश पनि गर्दछु. यो टापूको साधारण शैली र मिजासिला मानिसले हजुरको मन जित्ने छ भने यो होटेलले हजुरको इशिगाकी टापुको यात्रामा अझ सुगन्ध थप्ने छ।
Click here foralist of all the hotels on Ishigaki Island!
जापानको आधा भन्दा बढी सहर हराउन सक्छ; कारण भने ग्लोबल वार्मिङ्ग होइन
ओकिनावा जापानी उष्णकटिबंधीय टापुहरूको एक सुन्दर समूह हो जुन ताइवानको नजिक छ। यो जाडोमा चिसोबाट बच्न र तातो मौसममा आराम गर्न खोज्नेहरूको लागि उपयुक्त छ। भव्य सेता बालुवा समुद्री किनार, स्वादिष्ट खाना, र धेरै कुरा गर्नका साथ, ओकिनावा छुट्टी मनाउनेहरूको लागि बिसेष छ। यो महान प्रान्तको अनौठो संस्कृति पत्ता लगाउन खोज्नेहरूको लागि धेरै लोकप्रिय गन्तव्य…